Fianarantsoa: Fandalovan'ny Minisitry ny Rano, ny Fidiovana sy ny fanadiovana
vendredi, 03 août 2018 18:05
Sary Gasypatriote Fianarantsoa
Nitsidika ny ozinina manodina fako tantanan'ny Le Relais de Madagascar ny Minisitra Roland Ravatomanga ny marain'ity zoma 3 aogositra ity.
Izany dia fidinana ifotony entina mamantatra ny fomba fandraisana sy fanodinana ny fako an-tanandehibe araky ny fehinkevitra nivoaka tao anaty atrikasa tontosa tao Antsirabe tamin'ny herinandro lasa.
Napetraka ho modely eran'i Madagasikara ilay teknika ampiharina ao amin'io orinasa nahazo ny marika "eco-cert" io raha ny voalaza nandritra izao fitsidihana izao.
Voazava teto daholo na ny vina fohy ezaka sy maharitra ho fanamafisana ny fiaraha-miasan'ny kaominina sy ny ministera ary ny mpamatsy vola.
Tanjona manaraka ny fanapariahana ny paika sy tetika ary indrindra ny teknika fanaovana izany hatramin'ny fanangonana ny fako sy ny fifantenana azy ary ny fanodinana azy ho zezika compost tsy misy kasinga simika mihitsy.
Fantatra teto fa velarantany 10ha no anatontosana izao asa izao, eo ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny antsoina hoe : "phyto-épuration", ary misy ny fambolena sy fanamboarana zanakazo izay vatsian'ny fikambanana sy olontsotra mila izany eto an-toerana.
Niaraka nanatanteraka ny fitsidihana tamin'ny minisitra ireo mpiara-miasa aminy akaiky ao amin'ny foibe fa indrindra ny Ben'ny Tanàn'i Fianarantsoa sy ny servisy teknika. Teo ihany koa ny solontena avy ao amin'ny Jirama.